Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa wuxuu xaqiijiyay in diyaarad nooca yar ay maanta ku soo dhacday Deegaanka Cumar Beere – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa wuxuu xaqiijiyay in diyaarad nooca yar ay maanta ku soo dhacday Deegaanka Cumar Beere, oo qiyaastii 10km u jirta Degmada Afgooye.
Gudoomiyaha waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira cidda iska leh diyaaradaasi, wax walbana ay kala cadaan doonaan saacadaha soo socda, sida uu yiri.
Gudoomiyaha, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ay ciidan u direen Deegaankaasi, xilli Xoogaga Ururka Al Shabaab ay gacanta ku dhigeen diyaaradaasi.
C/qaadir Maxamed Nuur, ayaa ku waramaya in goobta ay diyaaraddu ku soo dhacday uu roob ka da’aayo, isagoona muujiyay inay adag tahay in Ciidanku ay horey u gaaraan halkaasi.
C/qaadir Siidii oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa waxa uu tibaaxay inaanay wax faah faahin ah ka hayn inta qof ee diyaaradaasi la socotay, jihada ay ka timid iyo halka ay ku wajahneyd.
Illaa iyo hadda lama garanaayo waxa ay ku sugan yihiin duuliyihii diyaaradaasi iyo rakaabkii kale ee la socday. Sidoo kalana lama garanayo cidda dhabta ihi ee diyaaradaasi leh.
Waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in diyaaraddu ay ka timid Magaalada Nairobi, ayna ku soo jeeday Garoonka Balli-doogle Ee Degmada Wanlaweyn.
Cumar Beere, ayaa deegaan ahaan waxa uu ku yaallaa inta u dhaxeyso Afgooye iyo Toora Toorow. Toora Toorow waxaa gacanta ku haaya oo ka arrimiya Ururka Al Shabaab.